RASMI: FA-ga Oo Maamulka Premier League Iyo Kooxaha Horyaalka Ingiriiska Farta Ka Saaray Go'aan Adag. - Gool24.Net
RASMI: FA-ga Oo Maamulka Premier League Iyo Kooxaha Horyaalka Ingiriiska Farta Ka Saaray Go’aan Adag.
Xidhiidhka kubbada cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa go’aan adag ka soo saaray arimo ay isku hayeen kooxaha Premier League iyo maamulka horyaalka Premier league.
Dhinaca kale shirkii maanta ee kooxaha horyaalka Ingiriiska oo dhawr saacadood qaatay ayaa la ogaaday hal natiijo oo ka soo baxday waxayna go’aanadani soo baxayaan saacado kadib markii ay dawlada UK ogolaatay in June 1 uu horyaalka dib u bilaami karo.
Xidhiidhka kubbada cagta England ee FA-ga ayaa maamulka horyaalka Premier league iyo 20 ka kooxood waxa uu hadda si rasmi ah ugu war galiyay in ayna wax la aqbali karo ahayn in meesha laga saaro saddexda kooxood ee heerka hoose u dhaca.
Kooxaha Premier league kaga jira safka hoose ayaa waday olole ay kooxaha kale iyo Premier league ugu riixayeen in loo ansixiyo qaraar ah in xili ciyaareedkan la joojiyo saddexdii kooxood ee heerka labaad u dhici jiray laakiin FA-ga ayaa go’aankan ganafka ku dhuftay.
Waxa kale oo uu FA-gu kooxaha Premier league iyo maamulka sare ee Premier League ku war galiyay in ay iska ilaawaan hadal hayntii ahayd in xili ciyaareedka meesha laga saari karo waxaana hadda cadaatay go’aanka adag ee uu FA-gu iska taagay arimihii laysku hayay.
FA-ga ayaa hadda qaatay doorkii la filayay wuxuuna maamulka Premier league iyo 20 ka kooxood ku war galiyay in ay iska ilaawaan hadal haynta in meesha laga saaro kooxaha heerka labaad u dhaca ee la doonayay in laga badbaadiyo in ay heerka labaad u dhacaan iyo hadal hayntii in xili ciyaareedka la dhamaystiri kari waayo.
Haddaba waxa uu maamulka FA-gu muujiyay sida ay uga go’an tahay in aan laga leexan qorshihii xili ciyaareedka ee ahaa in dhamaan kulamada la ciyaaro iyo in saddexda kooxood ee ugu hooseeya Premeir league ay heerka labaad u dhici doonaan halka kuwa ugu sareeya heerka labaad ay Premier league u soo dalici doonaan.
Warka uu FA-gu soo saaray ayaa waran iyo falaadh xoogan oo wadnaha kaga dhacday ku noqonaysa dhamaan kooxaha ugu hooseeya miiska kala saraynta Premier League ee maamulka Premier League cadaadiska ku saarayay in aan xili ciyaareedka dib loo bilaabin haddii aan loo samayn waxa ay doonayaan.
Saddexda kooxood ee Premier league ugu hooseeya ee Norwich, Aston Villa iyo Bournemouth ayaa laf dhuun gashay ku ahaa dib u bilaabista Premier league laakiin go’aanka FA-ga ayaa hadda hubaal ka dhigaya in saddexdan kooxood ay ku qasbanaadaan in ay dagaalkii heerka labaad looga baxsanayay ay sii wataan.
Waxaa markii hore jiray qorshe la doonayay in xili ciyaareedka lagu go’aamiyo oo ahaa in koox kastaba loo xisaabiyo celcelis ahaan dhibcihii ay soo heshay laakiin xataa haddii kaas la isticmaalo saddexda kooxood Norwich, Aston Villa iyo Bournemouth ayaa si toos ah ugu dhacaya heerka labaad.
Dhinaca kale kooxaha Premier league oo maanta shir xaasaasi ah yeeshay ayaa hal arin ku heshiiyay kaas oo ah in la kordhiyo qandaraasyada ciyaartoyda heshiiskoodu dhacayo June 30 ee sida xorta ah ku baxaya si kooxaha ciyaartoydani ka tirsan yihiin loo siiyo fursad ay kooxaha ciyaartoyda xorta noqonayaa ugu sii nagaadaan inta xili ciyaareedka la dhamaystirayo.
Iyada oo dawlada UK ogolaatay in June 1 ay dib u furmi karaan kulamada Premier League isla markaana uu hadda FA-gu si buuxda u shaaciyay in ayna wax doorasho ahi ka jirin in kooxaha heerka labaad u dhici lahaa meesha laga saaro, xili ciyaareedkana la dhamaystiri doono waxay hadda awoodu u muuqataa mid ku ciirtay kooxihii iska caabinta samaynayay.
Si kastaba ha ahaatee, waxa uu FA-gu ciyaaray doorkii uu muddooyinkii ugu danbeeyay ka aamusnaa ee uu isku daawanayay kooxaha horyaalada iyo Maamulka Premier league waxaana hadda loo sheegay in ayna doorasho ka dhigan karin in xili ciyaareedka waxba kama jiraan laga dhigo iyo in kooxaha heerka labaad u dhacayaa ayna badbaadi karin.